मिटर ब्याज र हुन्डीको पैसा उठाउन ‘चेक बाउन्स’ « Naya Page
प्रकाशित मिति : 24 February, 2020 6:43 am
भक्तपुर, १२ फागुन । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बस्दै आएकी हेटौंडाकी रोजिता कर्माचार्य कौशलटारस्थित लक्ष्मी बैंकमा चेक साट्न पटक–पटक पुगिरहिन् ।
कर्माचार्यसँग एकै व्यक्तिले दिएका २५ लाख रुपैयाँका तीनवटा चेक थिए । हरेकपटक बैंकका कर्मचारीले चेक दिने व्यक्तिको खातामा त्यति पैसा नभएको भनेर फर्काउँथे । १ चैत ०७५ मा काटिएका चेकबाट पैसा निकाल्न खोज्दा बैंकले पैसा नभएको भनेपछि उनले चेक बाउन्स गराइन् ।
उनले चेक दिने काभ्रे नमोबुद्धका ‘छिरिङ’ भनिने कुमार लामाविरुद्ध गत ८ मंसिरमा महानगरीय प्रहरी वृत्त ठिमीमा उजुरी दिइन् । कर्माचार्यसँग पैसा लिएपछि लामाले चेक दिएका थिए । तर, खातामा पैसा जम्मा गर्न नसकेका लामालाई कर्माचार्यको उजुरीपछि प्रहरीले गत २३ मंसिरमा पक्राउ गर्‍यो ।
उनीविरुद्ध प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलायो । लामालाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेपछि हाल नख्खु कारागारमा छन् । तर, कुमारले रोजितासँग त्यतिका पैसा किन लगे ? र, किन फिर्ता गर्न सकेनन् ? भन्ने प्रहरीले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । कुमारविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकका रामकुमार भण्डारीले पनि ५२ लाख ठगी गरेको उजुरी दिएका छन् ।
तारकेश्वर नगरपालिका–१ का ५४ वर्षीय राजेन्द्र बुढाथोकी गत १४ माघमा पक्राउ परे । उनले एक व्यक्तिबाट पाँच लाख लिएको र फिर्ता गर्दा चेक दिए पनि पैसा जम्मा नगरेपछि चेक बाउन्सको मुद्दामा अदालतले सजाय तोकेको थियो ।
उनलाई उच्च अदालत पाटनको २८ असोज ०७६ को फैसलाले १५ दिन कैद र पाँच लाख जरिवाना तोकेको थियो । उस्तै, मुद्दामा दोषी ठहरिएका कलंकी बस्ने ३० वर्षीय राजेश बम पनि गत साता पक्राउ परे । उनले पैसा नभए पनि माछापुच्छे« बैंकको तीन लाख ५० हजारको चेक काटेको खुलेको थियो । उनीविरुद्ध अदालतले पाँच दिन कैद र तीन लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
भक्तपुर–४ का दिनेश सुवालले सिर्जना कार्कीबाट २६ कात्तिक ०७६ मा दुई वटा चेक लिए । कार्कीले सुवाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । पहिलो चेक नौ लाख ५० हजार रुपैयाँको एनआइसी एसिया बैंकको र अर्को सिद्धार्थ बैंकको ६ लाख रुपैयाँको थियो ।
आफूले पाउने रकम माग्दा पाएका चेक नसाटिएपछि उनले पनि बाउन्स गराए । कार्कीविरुद्ध प्रहरीले बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलायो । प्रहरीमा त्यसपछि उजुरीका चाङ लागे । कार्कीविरुद्ध मात्रै पाँच उजुरी परे । उनीविरुद्ध पूजा थापामगरले १८ लाख ५० हजार, टीकामाया सुनुवारले १५ लाख, रूपा भण्डारीले नौ लाख ८० हजार र सपना सुनुवारले पाँच लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको प्रहरी वृत्तले जनाएको छ ।
भक्तपुरको ठिमी प्रहरी वृत्तमा मात्रै उस्तै प्रकृतिका २८ मुद्दा परेका छन् । अन्य दर्जनौँ मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन् । यहाँ मात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकामै बैंकिङ कसुर, ठगी र आर्थिक अपराध मौलाएको छ ।
प्रहरीको काम नै कालो धन्दामा डुबेको पैसा उठाइदिने मात्रै भएको जस्तो गरी मुद्दा लड्न प्रहरीलाई भ्याइनभ्याइ छ । डिएसपी शान्तिराज कोइराला भन्छन्, ‘उस्तै प्रकृतिका मुद्दा धेरै छन्, अधिकांशले वैदेशिक रोजगार, व्यवसाय, घरायसी कामकाज र अन्य कारण देखाएका छन् ।
तर, प्रायः घटनामा अनुसन्धान गर्दा पैसा लिनुको कारण त्यस्तो देखिँदैन ।’ सहरमा हुन्डी, मिटर ब्याज र जुवामा पैसा लगाउने र नउठेपछि चेक बाउन्स गराई पैसा उठाउन प्रहरीकहाँ उजुरी दिने विकृति मौलाएको डिएसपी कोइराला बताउँछन् ।
‘धेरै कमाउने लोभले जानीजानी गैरकानुनी धन्दामा पैसा डुबाउँछन्, फिर्ता नभएपछि उजुरी गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको काम नै ठगीको पैसा उठाउने मात्रै भएझैँ छ ।’ साँच्चिकै ठगीका मुद्दामा प्रहरीको दायित्व भए पनि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि मिटर ब्याज, जुवा वा हुन्डीमा फसेको पैसा उठाउन सहज देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
तर, मुद्दाको फैसलासम्म पुग्दासमेत पक्ष, विपक्ष र साक्षीले समेत मिटर ब्याज वा हुन्डीमा लगानी गरेको खुलाउँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका सबै मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् । उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार शम्भुप्रसाद रेग्मी भन्छन्, ‘मुद्दाको मिसिलमा त्यस्ता कुरा खुल्दैनन्, खाली लेनदेनमा ठगी भएको कुरा आउँछ, पैसा नतिर्ने नियत देखिन्छ ।’
पछिल्ला वर्ष उपत्यकासहित बागमती प्रदेशका ११ जिल्लामा ‘बैंकिङ कसुर’सम्बन्धी अपराध दोब्बरले वृद्धि भएका छन् । उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन हजार ९१ वटा मुद्दा छन् । तीमध्ये दुई हजार नौ सय ६७ मुद्दा बैंकिङ कसुरका मात्रै छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अर्थात् ६ महिनामा बैंकिङ कसुरमा मात्रै एक हजार आठ सय ४३ मुद्दा दर्ता भए । अदालतका उपरजिस्टार रेग्मी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्षमा एक हजार आठ सय १९ मुद्दा दर्ता भएका थिए, यसवर्ष ६ महिनामै त्योभन्दा बढी अर्थात् एक हजार आठ सय ४३ मुद्दा दर्ता भइसके ।’
रेग्मीका अनुसार आधाभन्दा बढी मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् । अरू मुद्दा ऋण प्रवाह, कर्मचारी र सञ्चालकको स्वार्थ, विद्युतीय कारोबारमा ठगीलगायत छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट